lioh-admin – Land in Our Hands
Author lioh-adminPosted on ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 12, 2021 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 12, 2021 Categories ကမ်ပိန်းTags Ethnic People, Federal, Military Coup, ProtestLeaveacomment on တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီ၏စစ်ကြောင်း
၂၀၂၁-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂)ရက်
၂၀၂၁-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁)ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အာဏာသိမ်းမှုအား နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှု၊ လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်မှု အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချသည်။
စစ်ဘုရင်ဝါဒနှင့် ဘာသာရေး/လူမျိုးရေးဝါဒကိုအခြေပြု၍ ဖြစ်လာသည့် ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်စနစ်အား မိမိတို့အနေဖြင့် အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည်။
ဖမ်းဆီးထားသည့် နိုင်ငံရေးသမားများကိုလွှတ်ပေးရန်နှင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသော တရားစွဲခံထားရသော တောင်သူ လယ်သမားများအားလုံး ခြွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုနှင့်အတူ လက်တွဲ ကာကွယ်သွားမည်။
ဖက်ဆစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ် အပြီးတိုင်ကျရှုံးရေးနှင့် ၂၀၀၈-ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုနှင့်အတူ စုပေါင်းလက်တွဲကာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ဆန့်ကျင်သွားမည်။
ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုစနစ်ကို တည်ဆောက်ကြ”
Author lioh-adminPosted on ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2021 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2021 Categories သဘောထားကြေညာချက်Tags Denounce, Military CoupLeaveacomment on တပ်မတော်၏အာဏာသိမ်းမှုအား ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချခြင်း
Author lioh-adminPosted on ဒီဇင်ဘာ 26, 2020 ဒီဇင်ဘာ 27, 2020 Categories သုံးသပ်ချက်Tags Shifting Cultivation, ဓလေ့ထုံးတမ်း, ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာLeaveacomment on ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ သုံးသပ်အကြံပြုချက်
၂ဝ၂ဝ-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၄-ရက်နေ့က ဒို့မြေကွန်ရက်၊ Burma Environmental Working Group (BEWG)၊ မေတ္တာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် Kayah Earthrights Action Network (KEAN) တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဖက်ဒရယ်မြေစီမံအုပ်ချုပ်မှုစကားဝိုင်းကို zoom meeting မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီက ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူတစ်ဦးစီ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး တစ်နာရီခွဲကြာမြင့်သည့် အဆိုပါ အစည်းအဝေးကို ဒို့မြေကွန်ရက်ဖေ့စ်ဘုတ်ခ် စာမျက်နှာမှာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ Zoom မှာ တက်ရောက်ဖို့ စာရင်းပေးသွင်းသူ စုစုပေါင်း ၉၈-ဦးရှိပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာပေါ်တင်ထားတဲ့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုမှု အကြိမ်ရေ ၁,၈ဝဝ ထိ ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဖက်ဒရယ်မြေစီမံအုပ်ချုပ်မှု စကားဝိုင်း ပြုလုပ်ရခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က “အစိုးရရဲ့ မြေယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွင်းက စိုးရိမ်ပူပန်စရာတွေကို ထောက်ပြဆွေးနွေးနိုင်ဖို့” နဲ့ “ဖက်ဒရယ်မြေစီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွက် တောင်းဆိုချက်တွေကို စုစည်းဖော်ထုတ်ဆွေးနွေး” ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲအတွက် အခြေခံ စဉ်းစားချက်တွေက –
* မြေယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လက်ရှိမှာ ဘယ်လို အခင်းအကျင်းတွေ ရှိနေသလဲ?
* ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့ လားရာက ဘယ်ကိုသွားနေလဲ? ဖက်ဒရယ်ပန်းတိုင်ကနေ သွေဖီနေပြီလား?
* ဖက်ဒရယ်မြေစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆီရောက်ဖို့ ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲ? ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ?
ဆွေနွေးပွဲကို အဓိက ၂-ပိုင်းခွဲဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အမေးအဖြေကဏ္ဍနဲ့ အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ယနေ့ကာလအထိ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေ၊ လက်ရှိ အခင်းအကျင်းတွေကို ဆွေးနွေးကြပြီး ဒုတိယပိုင်းမှာ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်လို့ရမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ တစ်ဦးစီက ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ မြေယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ်မြေယာစနစ်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်တွေက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ် –
သမိုင်းအခင်းအကျင်း၊ မြေယာကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်နှင့် ဖက်ဒရယ်ပန်းတိုင်
ဒီခေါင်းစဉ်ကို ဒို့မြေကွန်ရက်က ကိုစည်သူက ဆွေးနွေးပြောကြားပြီး သမိုင်းတစ်လျှောက် မြေယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အခြေခံထားပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်နဲ့ ဘာကြောင့်လွဲချော်နေရတယ်၊ ဖက်ဒရယ်လို့ဆိုရင် ဘာတွေက အဓိကကျတယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်များ သုံးသပ်ချက်နှင့် ဖက်ဒရယ်အတွက်လားရာများ
ဒီခေါင်းစဉ်ကို KEAN က စောအယ်စေးက ဆွေးနွေးပြောကြားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ မြေကဏ္ဍမှာရှိနေ/ ဖြစ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ ယန္တရားတွေအပေါ် အသေးစိတ်သုံးသပ်ချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ် မြေစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆီ ခရီးဆက်နိုင်မယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
အစားအစာထုတ်လုပ်မှုစနစ်၊ အစားအစာ အုပ်စိုးစီမံမှုနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်
ဒီခေါင်းစဉ်ကို မေတ္တာက မစန်းဝေက ဆွေးနွေးထားပြီး မြေ၊ အရင်းအမြစ်၊ အစားအစာစနစ်တွေ အကြားက ချိတ်ဆက်မှုတွေ၊ အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့ အစားအစာစနစ်အပေါ် အမြတ်ထုတ်နေမှုတွေကို ဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်။ အသေးစားနဲ့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်တောင်သူတွေကို အစားအစာထုတ်လုပ်မှု စနစ်တွေကနေ ဘေးဖယ်ထုတ်ပြီး “မြို့ ပြ ကျူး” လို့ခေါ်တဲ့ သူတွေဖြစ်လာအောင် ဘယ်လို ဖိအားတွေ ဖြစ်နေစေလဲဆိုတာတွေအပေါ်မှာ မေးခွန်းတွေ ထုတ်ထားပါတယ်။
မြေသယံဇာတ၊ ပဋိပက္ခနှင့် ဖက်ဒရယ်မြေစီမံအုပ်ချုပ်မှု
ဒီခေါင်းစဉ်ကို BEWG က ကိုခွန်ဦးက ဆွေးနွေးထားပြီးတော့ အတိတ်ကာလက ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ရပ်တန့်သွားရခြင်းအကြောင်းရင်း၊ လက်ရှိမှာလည်း အလားတူအခြေအနေတွေ ထပ်ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရတွေအကြားက အာဏာခွဲဝေမှုကိစ္စနဲ့ မြေယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး/ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် R-ငါးလုံးကိုလည်း အကြံပြုပြောဆိုသွားပါတယ်။
 မူလအစီအစဉ်တွင် ဒို့မြေကွန်ရက်နှင့် ခေတ်သစ်မီဒီယာ ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာများတွင် တပြိုင်နက် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရန် ဖြစ်သော်လည်း နည်းပညာပြဿနာအရ ဒို့မြေကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်၌သာ ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
 ဆွေးနွေးချိန်တွင် ပါဝင်တက်ရောက်သူ ၆ဝ-ဦး ဖြစ်ပါသည်။
 အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ အစားပြန်လည်ပေးခြင်း/ကုစားခြင်း၊ အနာဂတ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကိုယ်စားပြုခြင်း၊ ပြန်လည်ခွဲဝေပေးခြင်း
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု မှတ်တမ်းကို ဒို့မြေကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ကြည်ရှုနိုင်ပါသည်။
Author lioh-adminPosted on အောက်တိုဘာ 14, 2020 နိုဝင်ဘာ 25, 2020 Categories Online Discussion, သုံးသပ်ချက်, အွန်လိုင်းစကားဝိုင်းTags Federal Land Governance, Federalism, FLGLeaveacomment on ဖက်ဒရယ်မြေစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စကားဝိုင်း (အောက်တိုဘာ ၂ဝ၂ဝ)
ဒို့မြေကွန်ရက်သည် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီးမှ တောင်သူငယ်များ၊ တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂများ၊ ၎င်းတို့နှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်နေကြသော ရပ်ရွာအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဖက်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ စုပေါင်း၍ မြေယာအရေးလှုပ်ရှားကြသော တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်သည့် စင်္ကြံဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စစ်မှန်မျှတသော ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဖွံ့ ဖြိုးရေး၊ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများကို ပြည့်မီရရှိစေရေး အားထုတ်ကြရာတွင် လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူများနှင့် အသေးစားမြေအသုံးပြုသူများ၊ ရေလုပ်သားများ၊ အထူး သဖြင့် ကျေးလက်များမှလူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ တိုင်းရင်းသားများ၊ စစ်/လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကြောင့် (သို့) ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် အကြီးစားစီမံကိန်းကြီးများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာရသူများ၏ ရေမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် လေးစားအသိအမှတ်ပြုခြင်းတို့မှာ မရှိမဖြစ်အရေးကြီးကြောင်း ဒို့မြေက ယုံကြည်ပါသည်။ ထိုသို့ယုံကြည်သည့်အလျောက် မြန်မာ့မြေကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အပြုသဘော ဆောင်သည့် ဝေဖန်သုံးသပ်အကြံပြုမှုများ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
၂ဝ၁၈-ခုနှစ်အတွင်း ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးရှိ မြေယာအရေးလှုပ်ရှားကြသည့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများ၊ တောင်သူလယ်သမားများနှင့် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများပါဝင်သည့် လူထုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများမှ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်များအရ (မြေနှင့်သက်ဆိုင်သည့်) တည်ဆဲဥပဒေများ၊ ပြင်ဆင်နေဆဲဥပဒေများ၊ အသစ် ရေးဆွဲလျက်ရှိသောဥပဒေများသည် ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း၊ ဥပဒေတစ်ခုရေးဆွဲရန် လိုအပ်သည့် မူဝါဒ/မူဘောင်များအား အခြေခံထားခြင်းမရှိကြောင်း၊ ဒေသခံ/ဌာနေတိုင်းရင်းသားပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံညှိနိုင်းမှုများပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း သုံးသပ်ထားသည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် မြေလွတ်မြေလပ်မြေရိုင်း ဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းရန်၊ မြေယာအခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝဦးစားပေးပြီး မူရင်းဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ မိရိုး ဖလာမြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မိရိုးဖလာမြေနယ်နိမိတ် သမိုင်းကြောင်းအမှန် ဖော်ထုတ်ခြင်းကို အားပေး လုပ်ဆောင်/အသိအမှတ်ပြုရေး ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသည့် ဖက်ဒရယ်မြေဥပဒေတစ်ရပ် ဦးစွာရေးဆွဲရန်လည်း တောင်းဆိုထားသည်။
ထို့အပြင် မြေဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဖြစ်ပွားနေဆဲ မြေယာပြဿနာ၊ ပဋိပက္ခများကို တရားမျှတစွာဖြေရှင်းနိုင်စေရမည်၊ အနာဂတ်မြေသယံဇာတအရင်းအမြစ်များကို ပြည်သူပြည်သားတိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်တိုင် အုပ်စိုးစီမံပိုင်ခွင့်ကို အာမခံနိုင်စေရမည်၊ အဓိကထိခိုက်ခံရသူများ/ ထိခိုက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူများအားလုံး ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသည့် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်လိုသည်ဟုလည်း တိုက်တွန်းထားသည်။ လက်ရှိတွင် အမျိုးသားမြေဥပဒေရေးဆွဲရေးအတွက် အစိုးရ၏အားထုတ်မှုများကို စတင်တွေ့ရှိလာရပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် လမ်းပြမြေပုံရေးဆွဲခြင်း ကိစ္စရပ်များကိုလည်း ကြားသိ ရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်ရှိမြေယာအခင်းအကျင်းများကို လူထုမြေယာအခွင့်အရေးရှုထောင့်အရ ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီး လွှမ်းခြုံမှုရှိသည့်မြေဥပဒေတစ်ရပ်အတွင်း အခြေခံရမည့်မူများအား ဤစာတမ်းဖြင့်ဖော်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤစာတမ်းကို ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးရှိ မိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းပြုစုဖော်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရပ်တည်ချက်စာတမ်းကို မြန်မာဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Author lioh-adminPosted on အောက်တိုဘာ 13, 2020 အောက်တိုဘာ 13, 2020 Categories သုံးသပ်ချက်Tags Land LawsLeaveacomment on လွှမ်းခြုံမှုရှိသည့်မြေဥပဒေတစ်ရပ်အတွက် ဒို့မြေကွန်ရက်၏ ရပ်တည်ချက်
Author lioh-adminPosted on စက်တင်ဘာ 30, 2020 ဒီဇင်ဘာ 4, 2020 Categories သုံးသပ်ချက်Tags analysis, Federal Land Governance, KEAN, NLLLeaveacomment on အနာဂတ်မြေယာအုပ်ချုပ်စီမံမှုတစ်ရပ်ဆီသို့ (KEAN ၏ သုံးသပ်ချက်)
Author lioh-adminPosted on စက်တင်ဘာ 8, 2020 စက်တင်ဘာ 16, 2020 Categories သဘောထားကြေညာချက်, သုံးသပ်ချက်Tags Action Plan, karenni, NLL, StatementLeaveacomment on အမျိုးသားမြေဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်(မူကြမ်း)အပေါ် ကရင်နီအရပ်ဘက်အဖွဲ့များ၏ သဘောထားရပ်တည်ချက် (စက်တင်ဘာ ၂ဝ၂ဝ)
Author lioh-adminPosted on ဇူလိုင် 26, 2020 ဒီဇင်ဘာ 2, 2020 Categories IECTags IEC, Value of landLeaveacomment on မြေတန်ဖိုး (Short-clip)
မှတ်တမ်းများ လ ရွေးပါ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2021 ဒီဇင်ဘာ 2020 အောက်တိုဘာ 2020 စက်တင်ဘာ 2020 ဇူလိုင် 2020 မတ် 2020 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2020 ဇန်နဝါရီ 2020 နိုဝင်ဘာ 2019 ဩဂုတ် 2019 ဇူလိုင် 2019 ဇွန် 2019 ဧပြီ 2019 မတ် 2019 ဇန်နဝါရီ 2015 အောက်တိုဘာ 2014